Page 15 – शब्दशिखा
तीन शिक्षक–तीन अचम्मका झलक
November 12, 2014 November 22, 2015 adminकथा
पहिलो झलक : पहिलो शिक्षक शिक्षक (मास्टर) रित्तो झोला बोकेर खाद्यान्न भण्डार केन्द्रमा लाइनमा लागेको छ । उसका अगाडि र पछाडि थुप्रै मान्छे पनि लाइनमा उभिएका छन् । धेरै बेरदेखि मास्टर लाइनमा उभिएको छ । उसको पछाडिका मान्छेहरु उसलाई ठेल्दै पेल्दै अगाडि बढिरहेका…
लक्ष्मीकान्त वैष्णवLeaveacomment
November 12, 2014 December 10, 2014 adminस्मृति
अनुरोधको विचलन । प्लेनको ब्ल्याक टिकट किन्ने सामथ्र्यहीनता । नयाँ भूगोल घुम्ने, त्यहाँको जीवन पढ्ने, अनुभव–अनुभूति बटुल्ने । एउटा रुचि सबुको । बाँके, दाङ, सल्यान, रुकुम हुँदै हामी राडी पुग्छौं । अलिपर सानी भेरी छोडेर हामी ठुली भेरको किनारा समात्छौं…
वीरेन्द्र शाहीLeaveacomment
November 12, 2014 adminकविता
कसैले गजब छ भने पनि कसैले अनौठो छ भने पनि वास्तवमा वर्षौंसम्म घाम नपाएको आङ त हो दाङ तपाईंहरु आफ्नो दाङलाई कसैले ताप्लेजुङ र झापा कसैले डोल्पा र रोल्पा कसैले हुम्ला र जुम्ला आदि–इत्यादि भनेझैं हामी हाम्रो दाङलाई दाङ नै…
November 12, 2014 December 10, 2014 adminकविता
बेञ्चमै बसिराख्नुस्, उभिनुपर्दैन खोल्नुपर्दैन किताब बुझाउनुपर्दैन होमवर्क बनाउँदिनँ तपाईंलाई मुर्गा म गराउँदिनँ उठ्बस् बस्, आज म तपाईंको क्लास लिन्छु सर सोध्दिनँ म वाहियात प्रश्नहरू कसले ग¥यो आधुनिक नेपालको एकीकरण ? पहिलोचोटि कसले फत्ते ग¥यो सगरमाथा ? कसरी भयो श्री ३…
विनोद विक्रम केसीLeaveacomment
पञ्चायतको कठोर शासनको बेला हुर्के बढे पनि हाम्रो घरको वातावरण अलि पृथक थियो । घरमा केही माक्र्सवादी पुस्तक थिए, बाले पढ्नुहुन्थ्यो । त्यो बेलाका कम्युनिष्टहरु हाम्रो घरमा आउने, राजनीतिक कुरा गर्ने भएर पनि होला सानैदेखि मलाई सूचना (समाचार) को भोक थियो । तर…
सुशील गौतमLeaveacomment
खेत (खेतको माया लाग्छ र त खेत मेरो हो भनिन्छ । तेरो हो भनिन्छ । हाम्रो हो भनिन्छ । किनकि खेत र मान्छेबीचको सम्बन्धको कुरा आदिम युगबाट सुरु भएको रे । जतिखेर मान्छेलाई भोक लाग्न थालेछ ।) खेतमा । चरार साल धान रोपेको थियो । धानसँगै आलीमा…
दिल महराLeaveacomment
November 12, 2014 December 10, 2014 adminसमीक्षा
२०५९ सालमा मुक्तिक खोज उपन्यासमार्फत् थारू साहित्यको फाँटमा पाइला चालेका छविलाल कोपिला संयुक्त संग्रह समेत गरी ११ पुस्तक प्रकाशित गरिसकेका छन् । उपन्यासबाहेक उनी खासगरी कविता बिधामा केन्द्रित छन् । उनी साहित्यकार व्यक्तित्वको अलावा पत्रकार व्यक्तित्वबाट पनि परिचित छन् ।…
कृष्णराज सर्वहारीLeaveacomment
एसएलसी र स्कूले जीवनका ती दिनहरु